Ogaden News Agency (ONA) – CWXO oo si talantaali ah u galaya magaalooyinka waawayn iyo Geedi-aar oo lagu gubay baabuur cadaw
CWXO oo si talantaali ah u galaya magaalooyinka waawayn iyo Geedi-aar oo lagu gubay baabuur cadaw
Posted by ONA Admin	/ April 18, 2012
Dagaalada ka socda dalka ogadeenay ayaa waxay maalmahan marayeen marxalad xasaasi ah iyadoo ciidanka JWXO ay maalmahan lugta ku hayaan magaalooyinka waawayn gaar ahaan gobolada Qoraxay iyo Jarar oo ay ka wadeen abaabul iyo hawlgalo ciidan oo isku dhaf ah.
Waxaa intaa dheeraa dagaalo habeenimo oo ay ku qaadayeen goobaha fadhiisimada u ah ciidanka cadawga iyo kamiino ay ka galeen wadooyinka. Dagaaladaas qaar ka mid ah ayaan laga hayn wali faahfaahin buuxda . Dagaalada aan helnay warbixintooda ayaa u dhacay sidan;
16/4/12 kamiin ay qaybta Duufaan ee CWXO ka galeen wadad isku xidha Jigjiga iyo Dhagabuur meesha loo yaqaan Geedi-aar oo ku taal duleedka dhaw ee magaalada Dhagaxbuur, ayaa waxaa halkaa cadawga lagaga gubay hal baabuur iyo ciidankii saraa , waxaana halkaa ku nafwaayay inta la xaqiijiyay 12 askari waxaa ku dhaawacmay 20 kale ,wararkan oo laga helay ilo ka agdhaw ciidanka gumaysiga ayaa xaqiijiyay inaan wax fayaw ka bixin baabuurkaas.
11April 2012 waxa ay ciidanka xorayntu dagaal habeenimo ku qaadeen 3 xero oo kamid ah goobaha uu cadawgu ka dagan yahay magaalada waxayna kala yihiin;
Xarunta taliska ciidanga “ kiflaadoork” ee gobolka jarar, Xerada ku taal xaafada shanaad ee magaalada dhagaxbuur, Xerada ku taal xaafad labaad ee magaalada dhagaxbuur.
Isla 15April 2012 ayay mar kale ciidanka qaybta Duufaan weerar habeenimo ku qaadeen barta taliska guud ee ciidanka gobolka Jarareed ee loo yaqaan kiflaadoorka.
Dagaaladan oo dhacay xilli habeen ah kana dhacay gudaha xeryaha ciidamada ayaa waxaa la sheegayaa in loo gaystay khasaare balaadhan wayse adag in laga helo faahfaahin buuxdab. Wararka laga helayo ila-wareedyo ka agdhow cadawga ayaa sheegaya in dagaaladaa ay ku abuurtay cadawga seexanwaa iyo anfariir, iyadoo dadkuna ay dareemeen kalsoonida naftood-hurayaasha CWXO.
Waxaa dagaaladan barbar socday shirar sida caadada ahayd loo qabtay dadka magaalada kuwaas oo loogu gudbinayay fariinta halganka.
17April 2012 ciidanka xoraynat ayaa galay magaalada Qabri dahar halkaas oo ay cadawga kula galeen dagaalo googoos ah ,waxaana cadawga loogu gaystay khasaare balaadhan ,sida ay sheegeen dad ka agdhaw deegaanada cadawga oo arkayay aasitaanka ciidanka iyo qaaditaanka dhaawaca cadawga.
Dagaaladan lagu qaaday xeryaha magaalooyinka waxaa barbar socday in dadka loo qabtay kulamo lagu wacyi galinayo kuwaas oo u dhacay si fiican. Waxaa kale oo jira daaglo mir ah oo ka kala dhacay deegaanada kala ah;
11/4/12 dagaal mir ah oo ka dhacay Higlayay oo ka tirsan degmada Dhagxbuur waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari
10/4/12 Dagaalo ka kala dhacay laascadaad iyo hari-udhmuune ayaa cadawga lagaga dilay 2 askari 4 kala waa lagaga dhaawacayn
15/4/12 dagaal ka dhacay Golduulaan oo ka tirsan degmada Qabridahar ayaa cadawga lagaga dilay 1 askri tiro kalana waa lagaga dhaawacay.
Waxaa jiray dagaalo mir ah kuwaas oo aanan wali ka hayn faahfaahin rasmi ah waxaanad kala socon doontaan wararka danbe.
Shalay oo tarikhdu ku beganeyd 18 april ayaa wax ka da ay roblagu dirsaday magalada dhaxdenda waxa jifa biyo halka barakayal ay kacabanayan hoyila,an